लोकतन्त्रको विकल्प छैन | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / लोकतन्त्रको विकल्प छैन
Posted by: युगबोध in विचार August 19, 2019	0 24 Views
मुलुकमा अहिले कम्युनिष्टको सरकार छ। त्यो पनि झापा विद्रोह गरेको र १० वर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिष्टहरुको लगभग दुई तिहाईको सरकार छ। दुई नम्वर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ। त्यसैले जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। कांग्रेसी शासनमा बेथिति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी, माफियाकरण, व्यक्तिवाद र आफन्तवाद देखेका र त्यसबाट जनता र मुलुकको हित हु“दैन भनेर नै विकल्पमा नेकपालाई संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने मत दिएर विजयी बनाए। कांग्रेसले पञ्चायतले बनाएका राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिदिएको कारण जनताको नजरबाट कांग्रेस गि¥यो। कम्युनिष्ट उदायो ।
तर आज कांग्रेस भन्दा पनि तल झर्दैछ नेकपाको सरकार। जताततै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, माफियातन्त्र, चलेको छ। साधारण जनतालाई पनि प्यान नं. अनिवार्य बनाएको छ। हुन त आमजनतालाई करको दायरामा ल्याउनु अति राम्रो हो । तर एकैचोटि होइन। पहिलो चरणमा उद्योग, ब्यापार, नोकरीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ। यसको महत्व बुझाएर आम जनतालाई प्यानमा समावेश गर्ने वडामा मुकाम बनाएर उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई प्यानमा सहभागी गराउनुपर्दछ। प्यान नं. नभएपछि मतदान गर्न नपाउने गराएपछि सबैले बाध्य भएर बनाउछन्।
जनतास“ग रकम असुल्न हामफाल्ने तर सेवा दिन वर्षांै लगाएपछि यो भन्दा असक्षमता अरु के हुन सक्छ ? उदारणको लागि स्मार्ट लाइसेन्स। जबसम्म गुणस्तरीय सेवा छिटो छरितो दिन सरकारले सक्दैन तबसम्म सबै नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउ“छु भन्नु मूर्खता हो। यसले आम जनतामा आक्रोश फैलाउ“छ। प्यान नं. लिन दाङको तुलसीपुरमा आउनुपर्ने त्यो पनि कति दिन होटलमा बस्नुपर्ने। सिधै वडाबाट प्यान नं. पाउने व्यवस्था नहु“दासम्म आमजनतामा लागु नगर। अहिले बजारमा एक हजारको सामान किन्दा प्यान नं. चाहिने र कुनै संस्थाले एक दुई सय भाडा दिदा लिनेको प्यान नं. हुनुपर्ने यो त ह“ुदै भएन। तुरुन्त आफ्नो निर्णय बदल होइन भने अर्काे चुनावमा नांगेझार हुनेछौ। तिमी नांगेझार भए त केही हुने थिएन लोकतन्त्रै धरापमा पार्छौ कि भन्ने डर पो लागेको छ।मुलुकमा अहिले कम्युनिष्टको सरकार छ। त्यो पनि झापा विद्रोह गरेको र १० वर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिष्टहरुको लगभग दुई तिहाईको सरकार छ। दुई नम्वर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ। त्यसैले जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। कांग्रेसी शासनमा बेथिति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी, माफियाकरण, व्यक्तिवाद र आफन्तवाद देखेका र त्यसबाट जनता र मुलुकको हित हु“दैन भनेर नै विकल्पमा नेकपालाई संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने मत दिएर विजयी बनाए। कांग्रेसले पञ्चायतले बनाएका राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिदिएको कारण जनताको नजरबाट कांग्रेस गि¥यो। कम्युनिष्ट उदायो । तर आज कांग्रेस भन्दा पनि तल झर्दैछ नेकपाको सरकार। जताततै भ्रष्टाचार, घुसखोरी, माफियातन्त्र, चलेको छ। साधारण जनतालाई पनि प्यान नं. अनिवार्य बनाएको छ।
हुन त आमजनतालाई करको दायरामा ल्याउनु अति राम्रो हो । तर एकैचोटि होइन। पहिलो चरणमा उद्योग, ब्यापार, नोकरीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ। यसको महत्व बुझाएर आम जनतालाई प्यानमा समावेश गर्ने वडामा मुकाम बनाएर उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई प्यानमा सहभागी गराउनुपर्दछ। प्यान नं. नभएपछि मतदान गर्न नपाउने गराएपछि सबैले बाध्य भएर बनाउ“छन्। जनतासग रकम असुल्न हामफाल्ने तर सेवा दिन वर्षांै लगाएपछि यो भन्दा असक्षमता अरु के हुन सक्छ ? उदारणको लागि स्मार्ट लाइसेन्स। जबसम्म गुणस्तरीय सेवा छिटो छरितो दिन सरकारले सक्दैन तबसम्म सबै नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउ“छु भन्नु मूर्खता हो। यसले आम जनतामा आक्रोश फैलाउ“छ। प्यान नं. लिन दाङको तुलसीपुरमा आउनुपर्ने त्यो पनि कति दिन होटलमा बस्नुपर्ने। सिधै वडाबाट प्यान नं. पाउने व्यवस्था नहु“दासम्म आमजनतामा लागु नगर। अहिले बजारमा एक हजारको सामान किन्दा प्यान नं. चाहिने र कुनै संस्थाले एक दुई सय भाडा दिदा लिनेको प्यान नं. हुनुपर्ने यो त ह“ुदै भएन। तुरुन्त आफ्नो निर्णय बदल होइन भने अर्काे चुनावमा नांगेझार हुनेछौ। तिमी नांगेझार भए त केही हुने थिएन लोकतन्त्रै धरापमा पार्छौ कि भन्ने डर पो लागेको छ।नेपाली कांग्रेस सत्ता सञ्चालनमा असफल भएपछि नेपाली जनताले नेकपालाई लगभग दुई तिहाई मतको सरकार बनाउने हैसियतमा पु¥याइदिए। जनताको आशा र भरोसा नेकपाको सरकारले यसरी टुटाइदियो कि जनताको अगाडि अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै ठीक व्यवस्था होइन कि भन्ने अवस्थामा पु¥याइदियो। यही मौकाको फाइदा उठाउन खोज्दैछन् पूर्व राजतन्त्रवादीहरु। लोकतान्त्रिक सिष्टम नै खराव हो, भ्रष्ट व्यवस्था हो यो भन्दा राजतन्त्र ठीक भनेर जनता भड्काउने कोसिस गरिरहेका छन्। उनीहरुले के बुझेका छैनन् भने समय कहिल्यै पछाडि फर्कदैन, निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ।
जनआन्दोलनले इतिहासको पानामा राखिदिएको राजतन्त्र पुन फर्किन्छ भन्नु मरेको मान्छे पुन ब्यू“तिन्छ भनेर लाश कुर्नु जस्तै हो। संसारमा सबै भन्दा प्रगतिशील सिष्टम नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। पात्र गलत हुन सक्छन् तर सिष्टम कहिल्यै गलत हु“दैन। यो सामन्ती युग होइन न त दास युग नै हो। यो त प्रगतिशील युग हो र २१ औ शताब्दी हो। यो व्यवस्था खराव छ भने अझ राम्रो ब्यवस्थाको खोजी हुन सक्छ। लोकतन्त्रलाई जनप्रिय बनाउन के गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी गर्नु युवा समुदायको दायित्व हो। हामी जनताले लोकतान्त्रिक मर्मलाई बुझ्न नसक्दा पनि हाम्रा नेता भ्रष्ट बनेका छन्। जब लोकतन्त्रको महत्व आमजनताले बुझ्छन् तब भ्रष्ट नेता आफै पाखा लाग्छन्। त्यसैले जनतालाई सचेत बनाऊ र आफू पनि बनौं । हावाको भरमा कसैको बिरोध नगरांै। अहिले सरकारले राजनीतिलाई पेशा बनाइदियो। सबै जनप्रतिनिधिलाई तलवको ब्यवस्था गरिदियो। यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो राजनीतिलाई सेवाको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै लोकतान्त्रिक सिष्टम बलियो हुन्छ। व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। सरकार पारदर्शी बन्छ। त्यसैले राजनीति कसले गर्ने ? के को लागि गर्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो। हाम्रो देशका अधिकांश जनता कुनै न कुनै पार्टी वा उसको जनवर्गीय संगठनको सदस्य बनेका छन्।
त्यसैले आफ्नो नेताले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हामी फूलमाला लगाएर स्वागत गर्दछौं। अनि कसरी सुशाशन आउछ ? त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुलाई तलवको ब्यवस्था खारेज गराउन दबाब दिनुपर्दछ। राजनीति त १०–१५ प्रतिशतले गरे पुग्छ। जनता जनता नै बन्नुपर्दछ। गुण र दोषको आधारमा मत दिने हो भने भ्रष्टाचार आफै अन्त्य हुन्छ। आर्थिकरुपमा सक्षम र घर परिवारप्रति आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्नेहरुले मात्र राजनीति गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार निरन्तर हुनेछ। यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारीलाई फासीको सजाय हुनुपर्दछ। न्यायाधीशहरु न्यायपरिषदबाट नियुक्त ह“ुदा पार्टीका मान्छे अदालतमा भरिन्छन् अनि कसरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही होला ? त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति लोकसेवाबाट हुने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्दछ। हाम्रा अदालतका न्यायाधीशहरुले गलत फैसला गरे भने पछि उनीहरुलाई पनि कानुनको कठघरामा उभिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। युसको निम्ति विशेष अदालतको व्यवस्था हुनुपर्दछ। अनि मात्र अदालतमा हुने अनावश्यक चलखेल र त्यसको प्रभाव कम हुनेछ। जसले गर्दा न्यायाधीशहरु स्वतन्त्रपूर्वक र इमान्दारीका साथ न्याय सम्पादन गर्नेछन्। यसो भयो भने पहु“चवाला र पैसावाला भ्रष्टाचारी र अन्य अपराधीहरुले सजाय पाउने थिए। जसले गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम भई विकासले गति लिने थियो। हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसरी बदनाम हुनुमा भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक हो।
विकासमा अवरोध आउने पनि भ्रष्टाचार हो। यसको मूल जरो नै सरकार हो। सरकार पारदर्शी, जवाफदेही, दृढ इच्छाशक्तिको हुने बित्तिकै भ्रष्टाचार आफै अन्त्य हुन्छ। दुई चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ“दैमा र एक दुईजना ठेकदारलाई कारवाही ह“ुदैमा भ्रष्टाचार रोकिदैन। भ्रष्टाचारको मूल जरो सत्ता सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व नै हो। सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरुमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यही नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउछ। वर्तमान सरकारले सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने निर्णय भयो। यही नै भष्टाचारको मूल जरो हो। लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही बन्ने कुनै पनि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सुहाउ“दैन। कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारको असक्षमतालाई देखाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले राजतन्त्रको बेला के भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्दछ।
कुनै पनि तानाशाही ब्यवस्था अब टिक्न सक्दैन। त्यसैले राजतन्त्रको कल्पना नगरांै बरु यो भन्दा राम्रो सिष्टमको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोचांै। आफू एउटा गुटको चाकडी गर्ने अर्को त्यही पार्टीको अर्काे गुटको नेतालाई खुइलाउने गर्नाले पनि सिष्टमप्रति नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। आफ्नो गुटको नेताले जतिसुकै भ्रष्टाचार अनिमियता गरे पनि बचाउ गर्न दिन रात लागिपर्ने दास चिन्तनले गर्दा नै मुलुक बर्वाद ह“ुदै गइरहेको छ। आमजनता पार्टी सदस्य बन्ने होइन गुण र दोषका आधारमा मत दिने, गलतको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउने बित्तिकै राजनीतिक नेतृत्वहरु सही बाटोमा हि“ड्न बाध्य बन्नेछन्। जब राजनीतिक नेता सही बाटोमा हि“ड्दछन् तब सरकारले गलत काम गर्न सक्दैन। त्यसैले अब पार्टी कार्यकर्ता होइन सचेत नागरिक बनौं।
Previous: सुन सुहाउनको लागि होइन नुहाउनको लागि हो
Next: अपराध नियन्त्रण गर्ने दायित्व